उद्दण्ड मच्चाइ रहेको भारतीय बाबाजी
एउटा भारतमा कसैले नाम नसुनेको बाबाजी जो नेपाल भ्रमण मा छ। मेरो इनफार्मेशन अनुसार त्यो कमल थापा ले भाड़ा मा ल्याएको मान्छे होइन। त्यो काँग्रेस एमाले कै कुन चाहिँ मंत्री ले अझ मंत्रालय कै पैसा दिएको बाबाजी रहेछ। जुन कि गलत मात्र होइन गैर कानुनी काम हो। धर्म निरपेक्ष राज्य मा, जुन कि नेपाल हो, सरकार ले धार्मिक काम मा पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। गरेको खण्ड मा त्यो मंत्री पद बाट हट्नुपर्छ र त्यस काम लाई जुन सुकै नागरिकले अदालत मा गएर मुद्दा हालेर चैलेंज गर्न पाऊँछ।
सरकारी पक्ष ले नै गैर कानुनी किसिमले जनता को पैसा खुवाएको एउटा ढोंगी बाबाजी देखाएर तीन दल का बाहुन ले मधेसी जनजाति लाई सो जा नहीं तो गब्बर आ जायेगा भनेर तर्साउन खोजने? अझ कमल थापा को पनि नाम मुछ्न भ्याएको! को मंत्री त्यो। सुशील ले फाल्नुपर्ने भो।
baba ramdev bamdev gautam federalism gyanendra shah Kamal Thapa Nepal republic secularism